HomeWararka MaantaDal Muslim ah oo Haweeneey u Magacaabay Garsoore Maxkamad Sare
January 25, 2022 Wararka Maanta, Wararka Caalamka 0
Caa’isha Mailk oo 55 jir ah ayaa noqotay haweeneydii ugu horeesay oo muslim ah oo garsoore ka noqota maxkamadda ugu sareysa dalka Pakistan, waxaana sheekada haweeneydan si weyn u hadal heysa warbaahinta caalamka.
Haweeneydan ayaa ku biireysa 16-garsoore kale oo dhammaantood rag ah, waxaana Caa’isha Mailk noqoneysaa haweeneydii ugu horeesay oo loo dhaariyo in garsoore ka noqoto maxkamadda sare ee dalka Pakistan.
Qareenada u dooda arrimaha bulshada ayaa sheegay in dadaalkooda socday mudo ka badan 10-sano uu guul kusoo dhamaaday, waxa ayna sheegeen in guul taariikhi ah in haweeney kamid noqoto garsoorayaasha maxkamada ugu sareysa Pakistan.
Dadka kunool dalka Pakistan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay haweneydan kamid noqotay garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalka Pakistan, waxaana dadka qaar soo dhaweeyeen tallaabadan halka kuwa kalana ay dhaliileen .
Garsoore Malik, ayaa cilmiga sharciga ku baratay gudaha dalkeeda Pakistan iyo jaamacadda Harvard,ee dalka Mareykanka, waxaana labaatankii sano ee u dambeeyay ay ka shaqeynaysay maxkamadda sare ee Lahore ee bariga Pakistan.
Puntland oo Shaacisay Jadwalka 4kursi oo Dhawan La Qaban Doono